စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရန် - ရီးရဲလ် Caller ID ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရန် - ရီးရဲလ် Caller ID ကို
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရန် - ရီးရဲလ် Caller ID ကို APK ကို
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါ အစစ်အမှန် time.See အတွက်ဝင်ခေါ်ဆိုမှုမသိသောခေါ်ဆိုသူများ၏စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုသူ၏သတင်းအချက်အလက်သတ်မှတ်နှင့်ခေါ်ဆိုခကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လိုအသိပေးရွေးချယ်မှုလုပ်မယ့်စမတ် Caller ID နှင့် spam များကို blocker ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးဦးလျှင်သို့မဟုတ်ဖုန်း Spam တွေကို, telemarketing နှင့်လိမ်လည်မှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏အမှု၌ခေါ်ဆိုမှု drop - ထဲကထူးလေ၏။
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါရဲ့ စမတ် Caller ID ကို, ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပမ် blocker ခေါ်ဆိုမှုဖြေဆိုခြင်းမပြုမီခေါ်ဆိုသူကိုသိရန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သည်သူတို့၏အပုဒ်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့ & spam များကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်နောက်ပြန်။
တစ်ဦးအဝင်ခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်း Caller ID ကိုသတင်းအချက်အလက်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်သင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက် screen ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Caller ID ကိုပရိုဖိုင်းင်နိုင်ပါသည်:
• Caller ID ကို - နာမည်, လိပ်စာနှင့်ရုပ်ပုံတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့စမတ် Caller ID ကို။
• spam blocker - ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို spam, လိမ်လည်လှည်နှင့်တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူရုံမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု!
•ဆက်သွယ်ရန်မန်နေဂျာ - လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ်မှပြေလည်အဆက်အသွယ် Save ။
• Update ကိုဖုန်းစာအုပ် - သင့် friends 'ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လိပ်စာအချက်အလက်, ပုံများ, နှင့်ပိုပြီးနှင့်အတူကို up-to-date ဖြစ်အောင်သင့်ရဲ့ဖုန်းစာအုပ်ထားပါ။
• Caller တည်နေရာ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပထဝီတည်နေရာဝန်ဆောင်မှု။
•တွေ့ရှိ Caller ID သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသိပေးချက်များ။
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါစနစ်တကျသင်အမြဲတောင်းဆိုသူသိကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံပေါ်မှာဆက်သွယ်ပါနှင့် Caller ID ကိုဒေတာအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်!
ကျနော်တို့လေးစားတန်ဖိုးကဒေတာလုံခြုံရေးနှင့် privacy & ကိုမဆိုတတိယပါတီလျှောက်လွှာနှင့် / သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူဒေတာရောင်းချရန်သို့မဟုတ်ရှယ်ယာပါဘူး။
★စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါရဲ့ Caller ID ကိုအင်္ဂါရပ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည်
ခေါ်ဆိုမှုပြီးစီးပြီးနောက်★ဖုန်းခေါ်နေစဉ်အတွင်းကိုမရရှိနိုင်ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်မှုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါ Caller ID ကိုအသေးစိတျဆွဲယူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျစစ်မှန်သောဆက်သွယ်ပါသုံးပြီးပျော်မွေ့ပါလျှင် - မတ် Caller ID ကို - ညီကဘယ်လောက်ရှိသလဲအခမဲ့ခံစားရသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို အသုံးပြု. အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် update ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေနှင့်သင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတိုးတက်မှုပေါင်းစပ်။
စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရန် - ရီးရဲလ် Caller ID ကို
12.07 ကို MB
Appsbuyout apps များ
စစ်မှန်သော ID ကိုခေါ်ဆိုသူ ...
အကောင့်အဆင့်အစီအစဉ် - Caller ID ကို & Block